Umxholo: Umxholo oveliswe ngumsebenzisi | Martech Zone
Ithegi: Umxholo owenziwe ngumsebenzisi
I-infographic: Indlela iNethiwekhi yeNtlalontle ebuchaphazela ngayo uBomi bethu
NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 NgoLwesithathu, Matshi 24, 2021 UTom Siani
Namhlanje amaqonga eendaba ezentlalo anendima ephambili anokuyidlala ebomini bethu. Iibhiliyoni zabantu kwihlabathi liphela ziyazisebenzisa ukunxibelelana, ukonwaba, ukunxulumana, ukufikelela kwiindaba, ukukhangela imveliso / inkonzo, ivenkile, njl. Ubudala bakho okanye imvelaphi ayibalulekanga. Iinethiwekhi zentlalo ziya kuyichaphazela kakhulu imihla ngemihla. Unokufikelela ebantwini abanomdla ofanayo nakwakho kwaye wakhe ubuhlobo obuhlala buhlala nokuba ungaziwa. Unokuvelana nabanye abaninzi
Eyoyikisayo… I-8.8 yezigidi zezigidi zeerandi izakusetyenziswa ngeHalloween kulo nyaka
NgoMvulo, Oktobha 28, 2019 NgoMvulo, Oktobha 28, 2019 Douglas Karr
Kucace gca ukuba kwiimpawu kunye nabathengisi abajolise kwiiHalloween zemveli, ukusebenzisa iPinterest kunye neFacebook ukufikelela kuloo mmandla wabantu abadala kungangumdla wakho. Ngokuthelekisa, i-Instagram, i-Snapchat, kunye neTikTok zezona ziqonga zibalaseleyo ze "amava" eemveliso- ngakumbi ukuba ubonelela ngomtsalane kulo nyaka- kunye nabathengisi ukufikelela kweso sihlwele sincinci seHalloween. Iishelufu, iHalloween Ngamanani eHalloween Amanani aPhezulu kwaye aphantsi kwePipi iseyiyo
Kutheni ufuna ukuTyala imali kwiiVidiyo zeMveliso kwindawo yakho ye-Ecommerce
Lwesine, Okthobha 18, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Iividiyo zemveliso zibonelela abathengisi be-e ngendlela enobuchule yokubonisa iimveliso zabo ngelixa bevumela abathengi ithuba lokujonga iimveliso zisebenza. Ngo-2021, kuqikelelwa ukuba i-82% yazo zonke i-intanethi ziya kwenziwa ngokusetyenziswa kwevidiyo. Enye indlela amashishini eCommerce anokuhamba phambili ngayo kukudala iividiyo zemveliso. Iinkcukacha-manani ezikhuthaza iiVidiyo zeMveliso zeSayithi lakho le-Ecommerce: I-88% yabanini bamashishini bathi iividiyo zemveliso zonyuse amazinga okuguqula iividiyo zeMveliso
IVydia: Lawula uMxholo weVidiyo kunye namalungelo edijithali
NgoMvulo, Februwari 19, 2018 NgeCawa, ngoFebruwari 18, 2018 Douglas Karr
IVydia yinkampani yetekhnoloji yevidiyo ye-Inc 500 exhobisa abadali ukuba balawule ngokulula umxholo wabo kunye namalungelo edijithali ngeqonga elinye eliphakathi. Abaqulunqi bomxholo basebenzisa amandla evidiyo kuwo onke amaqonga ezentlalo akhoyo, nangona kunjalo, ukuqonda kwabo kunye nolawulo lwabo lwepropathi enomgangatho othile wokuqonda kunqunyelwe. I-Vydia ixhobisa abadali ngokusombulula le ngxaki ngesmart, isicelo sendalo iphela. URoy LaManna, uMseki kunye ne-CEO ye-Arhente yeVydia Vydia yeeNkqubo zeArhente zibandakanya ukukwazi:
Ukuthengisa ngokubanzi: Ukuqonda amaQela aBudala obahlukeneyo kunye nokukhetha kwabo
NgoLwesibini, nge-26 kaDisemba ngo-2017 NgoLwesibini, nge-26 kaDisemba ngo-2017 UDonna Moores
Abathengisi bahlala bekhangela iindlela ezintsha kunye neendlela zokufikelela kubaphulaphuli babo kwaye bafumane ezona ziphumo zibalaseleyo kwimikhankaso yentengiso. Ukuthengisa ngokubanzi sisinye sezicwangciso esinika abathengisi ithuba lokungena nzulu kubaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye baziqonde ngcono iimfuno zedijithali kunye nokukhethwa kwintengiso yabo. Yintoni ukuThengisa ngokuDala? Ukuthengisa ngokubanzi yinkqubo yokwahlula abaphulaphuli ngokwamacandelo ngokususela kwiminyaka yabo. Kwihlabathi lentengiso, i